kooxda Bayern oo Masaajid ka dhisayso Allianz Arena Frank Bilal Ribery oo siwayn ugu qayb qatay %
Naadiga kadhisan wadanka garmalka ee Bayern Munich ayaa shaacisay in kooxda ay Masaajid weyn ka dhiseyso qeyb ka mid ah Garoonkeeda si ay ugu cibaadeystaan cayaartooyda Muslmiinta ah iyo jamaahiirta kooxda
Arrintan soo jeedinteeda waxaa iska lahaa Frank Bilal Ribery, oo guddiga fulinta Kooxda ka codsaday in kooxdu Masaajid ka dhisto Garoonkeeda.
Guddiga ayaa markii hore u sheegay Frank Ribery in Qol isaga u gaar ah looga sameynayo Garoonka si uu halkaas ugu cibaadeysto hayeeshee waa uu diiday waxaana uu sheegay in isaga kaligii uusan Muslim ahayn.
Bavarian-ka ayaa dib isugu laabatay waxaana ay ku dhawaaqeen in ay dhisayaan Masaajid weyn oo ay Taageerayaasha iyo Cayaartooyda Muslimiinta ah ku cibaadeysan karaan.
Arrintan haddii ay dhabowdo Garoonka Allianz Arena waxaa uu noqonayaa Garoonka kaliya ee Caalamka leh Masaajid weyn oo ay dadka ku cibaadeystaan.
Kooxda Bayern Minich waxaa ay sheegtay in Masaajidka uu yeelanayo Imaam,Mu’addim iyo guddi maamula, iyo xafiisyo islamarkaana mushaarkooda ay iyada bixineyso.
Sidoo kale dhismaha Masaajidka waxaa ay sheegtay in 85% lacagta lagu dhisayo Masaajidka ay kooxda bixineyso iyada oo inta soo hartayna ay bixinayaan Cayaartooyda iyo taageerayaasha kooxda Bayern Munich